चिनियाँ राष्ट्रपति सीको स्वागत र विदाइका लागि निजामती कर्मचारी ! - नेपालबहस
गृहपृष्ठ फीचर्ड (ट्रेन्डिङ) चिनियाँ राष्ट्रपति सीको स्वागत र विदाइका लागि निजामती कर्मचारी !
चिनियाँ राष्ट्रपति सीको स्वागत र विदाइका लागि निजामती कर्मचारी !
२४ असोज, काठमाडौं । चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको स्वागत र विदाइका लागि निजामती कर्मचारीलाई सडकमा खटाइने भएको छ ।
राष्ट्रपति सी नेपाल आउने दिन शनिबार र स्वदेश फर्किने दिन आइतबार कर्मचारीले नयाँ बानेश्वरदेखि माइतीघर मण्डलासम्म निजामती कर्मचारीले स्वागत गर्नेछन् ।
त्यसका लागि निजामती कर्मचारीहरुलाई निजामती पोसाक लगाएर शनिबार दिउँसो ३ः४५ बजे र आइतबार विहान ११ स् १५ बजे आउन भनिएको छ ।
स्रोतका अनुसार सबै मन्त्रालयलाई १०० जना कर्मचारी ल्याउनपर्ने कोटा तोकिएको छ । कर, मन्त्रालयहरुलाई कर्मचारी राख्ने आआफ्नो ठाउँ तोकिएको छ । तोकिएको ठाउँमा कर्मचारी आए नआएको हेर्न सडकमै हाजिर गर्ने व्यवस्था समेत मिलाइएको छ ।
अघिल्लो लेखसिन्धुपाल्चोक बस दुर्घटनाको छानबिन गर्न कांग्रेसको माग
अर्को लेखसार्वजनिक बिदामा पनि बैंक खुला राख्न राष्ट्र बैंकको निर्देशन
अस्लिल शब्दमा कर्मचारी थर्काउने नेकपा नेतालाई कारवाही गर्न माग
तोकिएकै समयमा आकाशे पुल सम्पन्न नहुने
राष्ट्रपति सी को मुहारमा देखिएको त्यो मुस्कान
संस्कारबिहिन निजामति प्रशासनः चीनका राष्ट्रपति सी जीनपिङको भ्रमणमा जे देखियो
राष्ट्रपति सीसँग नेकपाका नेताहरु
नेपाल र चीनबीच उच्चस्तरीय औपचारिक वार्ता सोल्टी होटलमा शुरु